Ihe mgbochi ụlọ ọrụ na -aza - IntegritySyndicate.com
Mbido Mgbakwunye Ihe mgbochi ụlọ ọrụ na -aza
Kedu maka Jeramiah 1, Nke a abụghị chi nke abụọ?
Gịnị banyere 1 Samuel 3:21, "Jehova kpughere onwe ya site n'okwu Jehova"?
Kedu maka Jenesis 48: 15-16, "G0d-mmụọ ozi nke gbapụtara m n'ihe ọjọọ niile"?
Gịnị banyere Jenesis 16: 7-13?
Gịnị banyere Ọpụpụ 23: 20-23?
Gịnị banyere Zekaraya 3: 1-4? Ndị nnọchi anya Chineke n'ihu Chineke
Gịnị banyere Zekaraya 3: 4? Ewepụwo m ajọ omume gị
Gịnị banyere Ndị Ikpe 13: 21-23?
Ụfọdụ ndị na -arịọ mgbaghara chọrọ ịgụ agụ nke abụọ n'ime Jeremaya 1. Agbanyeghị, mgbe okwu Onye -nwe -anyị ga -abịakwute mmadụ nke bụ naanị Chineke na -ezitere ha ozi ya ma ọ bụ Chukwu na -ekpughere ha onwe ya. Ọ bụ ọrụ nke Chineke - JEHOVA (YHWH) na -enye ha ozi a. A na -aghọta ngwaa okwu nke okwu Jehova na -abịakwute mmadụ n'ụzọ dị mfe na -enweghị mkpa nke inwe chi ọzọ. N'ụzọ dị iche iche a na -ezigara ndị mmadụ okwu Jehova.
N'ọnọdụ ụfọdụ, Jehova na -ewepụta ngosipụta anụ ahụ nke na -emekọrịta ihe na ndị mmadụ. Nke a bụ okwu dị n'amaokwu nke 9 Jehova setịrị aka ya metụ n'ọnụ Jeremaịa. Ọ dịghịkwa mkpa na ka Chineke wee pụta n'ụzọ nke anụ ahụ, ọ ga -abụrịrị site na Chineke nke abụọ. Ụfọdụ na -enwe mmasị iche na “Okwu nke Onye -nwe” bụ chi ma na otu onye ahụ bụ onye na -egosipụta ngosipụta anụ ahụ na amaokwu 9. Agbanyeghị amaokwu nke 9 kwuru na Jehova setịrị aka ya metụ m ọnụ (ọ bụghị Okwu ahụ). ma ọ bụ Okwu Jehova). Ụzọ dị mfe isi were amaokwu a bụ na ozi Chineke na -abịakwute Jeramịaịa, mgbe ahụ Chineke na -egosipụta Jeramiah n'ụzọ anụ ahụ na n'ụzọ anụ ahụ ka Chineke wee metụ ya aka. Ọ dị mfe ịgụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ a ka ọ metụtara naanị otu onye Chineke, YHWH n'onwe ya nakwa na okwu Onyenwe anyị abụghị onye ọzọ. N'ihi ya, amaokwu a anaghị esiri ya ike site n'otu echiche.
Jeremaia 1: 1-14 IGBOB-Jehova setiri aka-Ya metu ọnum
Na1 Okwu Jeremaịa, nwa Hilkaịa, otu n’ime ndị nchụàjà nọ n’Anatọt n’ala Benjamin, 2 onye okwu Jehova ruru ya nti n'ubọchi Josaia nwa Emon, bú eze Juda, n'arọ nke -iri -na -atọ nke ọ bu eze. 3 Ọ bịakwara n'ụbọchị Jehoyakim nwa Josaya, bụ́ eze Juda, ruokwa n'ọgwụgwụ nke afọ nke iri na otu nke Zedekaya nwa Josaya, bụ́ eze Juda, ruo mgbe a dọọrọ Jeruselem n'agha n'ọnwa nke ise.
4 Okwu Jehova we ruem nti, si, 5 “Tupu m kpụọ gị n'afọ, ama m gị, tupu a mụọ gị, edoro m gị nsọ; Emere m gị onye amụma nye mba dị iche iche. ” 6 M'we si, Ewó, Onye -nwe -ayi Jehova! Lee, amaghị m ikwu okwu, n'ihi na abụ m nwata. ” 7 Ma Jehova sịrị m, “Asịla, 'Abụ m nwata. n'ihi na onye ọ bụla m ga -eziga gị ka ị gakwuru, ihe ọ bụla m nyere gị n'iwu ka ị ga -agwa ya. 8 Atụla ha egwu, n'ihi na m nọnyeere gị ịnapụta gị, ka Jehova kwuru. ” 9 Jehova we setipu aka -Ya, metu ọnum. Jehova wee sị m: “Lee, etinyewo m okwu m n'ọnụ gị. 10 Lee, emewo m gị taa ka ị na -achị mba dị iche iche na alaeze dị iche iche, ịkwatu na ịkwatu, ibibi na ịkwatu, iwulite na ịkụ ihe. ”
11 Okwu Jehova wee ruo m ntị ọzọ, sị: “Jeremaịa, gịnị ka ị na -ahụ?” M wee sị, "Ahụrụ m alaka almọnd." 12 Jehova wee sị m, “Ị hụwo nke ọma, n'ihi na m na -elezi okwu m anya ime ya.” 13 Okwu Jehova wee ruo m ntị nke ugboro abụọ, sị, “Gịnị ka ị na -ahụ?” M wee sị, "Ahụrụ m ite na -esi nri, chere ihu n'ebe ugwu." 14 Jehova wee sị m, “A ga -esi n'ebe ugwu bibie ndị niile bi n'ala a.
1 Samuel 3:21 bụ amaokwu ọzọ nke etolitere na -ekwu na okwu Jehova bụ chi. Anyị ga -ebu ụzọ rịba ama n'amaokwu nke 1 na a na -ejikọ okwu Onyenwe anyị dị ụkọ na enweghị ọhụụ ugboro ugboro nakwa na okwu Jehova abụghị onye kamakwa ụfọdụ ihe mkpughe nke Chineke nke nwere ike igosipụta site n'okwu ma ọ bụ ọhụụ. N'akụkọ a, o doro anya na ọ bụ naanị otu agwa Chukwu.
Ndị na -akwado Atọ n'Ime Otu na -achọ ịgụ mmadụ abụọ n'ime amaokwu 21 ọ na -ekwu, Onyenwe anyị kpughere onwe ya nye Samuel site n'okwu Onyenwe anyị. Agbanyeghị, nke a na -ekwu maka ọrụ nke Chineke nke onye amụma na -enweta mkpughe na ọhụụ sitere n'aka Chineke. A na -akọwakarị ọrụ nke ịbụ onye amụma na nke ịnata mkpughe sitere na Chineke n'ụdị adịghị mma dị ka “okwu” nke Chineke na -abịakwute ha. 1 Ndị Kọrịnt 12: 4-11 na-akwado nghọta a na okwu na-abịakwute ndị ozi Chineke na ka ha wee nata “okwu amamihe” ma ọ bụ “okwu ihe ọmụma” nke bụ ijere otu Chineke ahụ ozi. Ọdịiche dị iche iche nke ije ozi sitere na otu Mmụọ ahụ (otu Chineke na Nna).
(Gụọ 1 Samuel 3: 1-11.) The okwu Jehova dị ụkọ n'oge ahụ; enweghị ọhụụ ugboro ugboro
1 Ma nwa okoro ahụ bụ Samuel na -ejere Jehova ozi n'ihu Ilaị. Na na okwu Jehova dị ụkọ n'oge ahụ; enweghị ọhụụ ugboro ugboro. 2 N’oge ahụ, Ilaị, onye anya ya malitere isi inyoghi inyoghi ka ọ ghara ịhụ ụzọ, dina n’ebe nke ya. 3 Oriọna Chineke akwụsịbeghị, Samuel dinara n'ụlọ nsọ Jehova, ebe igbe Chineke dị. 4 Jehova wee kpọọ Samuel, sị ya: “Lee m! " 5 gbakwuru Ilaị, sị, “Lee m, n'ihi na ị kpọrọ m.” Ma ọ sịrị, “Akpọghị m gị; dina ala ọzọ. ” O wee gaa dinara ala. 6 Jehova we kpọ òkù ọzọ, "Samuel!" Samuel we bilie jekuru Ilai, si, Lem; n'ihi na i kpọrọm òkù. Ma ọ sịrị, “Akpọghị m ya, nwa m; dina ala ọzọ. ” 7 Ma Samuel akāmaghi Jehova, ak notkpugheghi kwa okwu Jehova nye ya. 8 Jehova we kpọ Samuel òkù ọzọ nke ub .ò atọ. O we bilie jekuru Ilai, si, Lem; n'ihi na i kpọrọm òkù. Ilai we ghọta na ọ bu Jehova nākpọ nwa -okoro ahu òkù. 9 Ilai we si Samuel, Je, dina ala, ọ buru kwa na ọ kpọ gi òkù, i gāsi, Kwue, Jehova, n'ihi na orù -gi nānu. 10 Jehova we bia guzo, nākpọ dika Ọ kpọrọ ub timesò nile, "Samuel! Samuel! ” Samuel we si, Kwue, n'ihi na orù -gi nānu. 11 Jehova we gwa Samuel okwu, “Lee, aga m eme ihe n'Izrel nke ntị abụọ nke onye ọ bụla nụrụ ya ga -ama jijiji.
(Gụọ 1 Samuel 3: 19-21.) Jehova kpugheere Samuel onwe ya na Shaịlo site n'okwu Jehova
19 Na Samuel nyinii, Jehova we nọyere ya, ekweghi kwa ka okwu ọ bula dara n'ala. 20 Israel nile site na Dan rue Bia -sheba we mara nka Samuel guzosiri ike dị ka onye amụma Jehova. 21 Jehova wee pụta ìhè ọzọ na Shaịlo, n'ihi na Jehova kpughere Onwe -ya nye Samuel na Shailo site n'okwu Jehova.
(1 Ndị Kọrịnt 12: 4-11) okwu amamihe; na onye ozo okwu ihe ọmụma, dika otu Mọ ahu si di
4 Ugbu a enwere onyinye dị iche iche, mana otu mmụọ ahụ. 5 E nwekwara ụdị dị iche iche nke ije ozi, na otu Onye -nwe. 6 Na ụdị ọrụ dị iche iche dị, kama ọ bụ otu Chineke ahụ, onye na -arụ ọrụ ihe niile n'ime ihe niile. 7 Ma onye ọ bụla ka e nyere ngosipụta nke mmụọ nsọ ka ọ baa uru. 8 N'ihi na a na -enye otu onye mmụọ nsọ okwu amamihe; na onye ozo okwu ihe ọmụma, dika otu Mọ ahu si di: 9 nye okwukwe ọzọ, n'otu Mmụọ ahụ; nyekwa onye ọzọ onyinye ịgwọ ọrịa, n'ime otu Mmụọ; 10 nye kwa onye ọzọ ọrụ ebube; nye kwa onye amụma ọzọ; nyekwa onye ọzọ nghọta mmụọ: nye onye ọzọ ụdị asụsụ dị iche iche; nyekwa onye ọzọ ịkọwa asụsụ. 11 mana ihe ndị a niile na -arụ ọrụ otu mmụọ ahụ, na -ekewa onye ọ bụla n'otu n'otu n'otu dị ka ọ chọrọ.
Ụfọdụ na-amasịkwa ịzọrọ na Jenesis 48: 15-16 mere ka ọdịiche dị na Chineke na mmụọ ozi bụrụ mmadụ abụọ ma bụrụkwa Chineke. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na -agwa Chineke okwu na njirimara onlogy nakwa n'ụzọ o siri gosipụta onwe ya dịka mmụọ ozi. A na -akpọ Chineke onye ozi n'ọnọdụ a n'ihi na Malach (onye ozi) nke Chineke nwekwara ike bụrụ ngosipụta nke Chineke (ọ bụghị onye dị iche). A na -ahụ ihe ngosi dị otu a ma ọ bụ nke achọpụtara dị ka ihe pụtara mmadụ ma ọ bụ ngosipụta ọzọ dị ka osisi na -ere ọkụ ma ọ bụ ogidi ọkụ. Chineke nke a na -adịghị ahụkarị nwere ike ikpughe onwe ya n'ụzọ a na -ahụ anya nke enwere ike ịmekọrịta. Otu onye na -agụ akwụkwọ nsọ na -aghọta na mgbe ụfọdụ mmụọ ozi nke Chineke na -abụ ihe mmụọ nke Chineke kama ịbụ onye dị iche dị ka ọ dị na ọnọdụ a, mmụọ ozi ahụ enweghị ihe dị iche na Chineke Jekọb.
Jenesis 48: 15-16, Chineke… Chineke… mmụọ ozi nke gbapụtara m n'ihe ọjọọ niile
15 Ọ gọzie Josef wee sị,Chineke nke nna m Abraham na Aisak jere ije n'ihu ya, Chineke onye na -azụ m ogologo ndụ m niile ruo taa, 16 mmụọ ozi nke gbapụtara m n'ihe ọjọọ niile, gọzie ụmụ nwoke; na nime ha ka ag bega n'iru n'aham, na aha nnam -hà, bú Abraham na Aisak; ka ha baakwa ụba n’ime ụwa. ”
Jenesis 16: 7-11, Mọ -ozi nke Jehova we si ya… Jehova egewo nti na nweda -gi
7 Mmụọ ozi Jehova hụrụ ya n'akuku isi -iyi miri n'ọzara, isi -iyi ahu di n'uzọ Shua. 8 Ọ si, Hega, nwayi n servantjere Serai ozi, òle ebe i siri bia, òle ebe kwa ka i n goingje? Ọ sịrị, "Ana m agbanahụ nne nne m Sarai." 9 Mmụọ ozi Jehova sịrị ya, "Laghachikwuru nne gị ukwu ma doo onwe ya n'okpuru." 10 Mọ -ozi nke Jehova we si kwa ya, N'ezie M'g willme ka nkpuru -gi ba uba, agaghi -aguta kwa ha n'ihi ọtutu. " 11 Mọ -ozi nke Jehova we si ya, Le, gi di ime, i gāmu kwa nwa -nwoke. Ị ga -akpọ aha ya Ishmel, n'ihi na Jehova egewo ntị n'ahụhụ gị.
Na Jenesis 16: 7-13, mmụọ ozi Jehova na-agwa Hega okwu dị ka onye nnọchi anya Jehova (YHWH). Enwere akara dị iche iche mmụọ ozi Jehova na -ekwu maka Jehova (YHWH). Anyị ekwesịghị ịghọta na naanị n'ihi na akụkụ ahụ na -ekwu okwu dị ka Jehova, a na -agwakwa ya dị ka Jehova na mmụọ ozi ahụ bụ Jehova.
Jenesis 16: 7-13 I bụ Chineke nke na-ahụ ụzọ
7 Mọ -ozi nke Jehova hụrụ ya n'akụkụ isi iyi mmiri dị n'ọzara, isi mmiri dị n'ụzọ Shua. 8 Ọ si, Hega, nwayi n servantjere Serai ozi, òle ebe i siri bia, òle ebe kwa ka i n goingje? Ọ sịrị, "Ana m agbanahụ nne nne m Sarai." 9 Mmụọ ozi Jehova sịrị ya, "Laghachikwuru nne gị ukwu ma doo onwe ya n'okpuru." 10 Mmụọ ozi nke Jehova wee sị ya, "M ga -eme ka mkpụrụ gị baa ụba nke ukwuu ka a ghara ịgụta ha ọnụ n'ihi ọtụtụ." 11 na mmụọ ozi Jehova sịrị ya, “Lee, ị dị ime, ị ga -amụkwa nwa nwoke. Ị ga -akpọ aha ya Ishmel, n'ihi na Jehova egewo ntị n'ahụhụ gị. 12 Ọ ga -abụ ịnyịnya ibu ọhịa nke mmadụ, aka ya megide mmadụ niile na aka onye ọ bụla megide ya, ọ ga -ebikwa megide ndị ikwu ya niile. ” 13 O wee kpọọ aha Jehova nke gwara ya okwu, “Ị bụ Chineke nke na -ahụ ụzọ,” n'ihi na ọ sịrị, "N'ezie, ahụla m onye na -elekọta m.. "
"M ga -eme ka ụmụ gị baa ụba nke ukwuu ka a ghara ịgụta ha ọnụ maka ọtụtụ"
Lee, mmụọ ozi Jehova na -ekwuchitere Jehova (YHWH). Nkwa dị otu a sitere n'aka JEHOVA mana onye ozi nke Jehova nwere ike ikwu okwu na mmadụ mbụ dị ka a ga -asị na Jehova (YHWH) n'onwe ya.
“N’ihi na Jehova egewo ntị n’ahụhụ gị”
Ebe mmụọ ozi Jehova na -ekwu maka Jehova. Ọ naghị ekwu n'ihi na "m" egewo ntị na nhụjuanya gị kama ọ na -ekwu maka "ONYENWE ANYỊ" ma ọ bụrụ na mmụọ ozi nke Jehova bụ ya onwe ya bụ Jehova, ọ ga -achọ naanị ịkọwa onwe ya.
Ọ kpọrọ aha Jehova nke gwara ya okwu, “Ị bụ Chineke nke na -ahụ ụzọ”
Jehova gwara ya okwu site na mmụọ ozi Jehova. Dịka iwu nke ụlọ ọrụ si kwuo, Jehova na -ekwu okwu site na ndị nnọchi anya ya na ndị a na -ekwu maka ụdị nzute a na onye ozi Chineke na -ezute Chineke n'onwe ya. Chineke lekọtara ya ma jiri mmụọ ozi jeere ya ozi. Hega nyere Jehova (ọ bụghị mmụọ ozi ahụ) mgbe ọ sịrị "Ya mere ọ kpọrọ aha Jehova nke gwara ya okwu," Ị bụ Chineke nke na -ahụ ụzọ. " Nke a abụghị ihe ọ kpọrọ mmụọ ozi nke gwara ya okwu. Ọ bụ ihe ọ kpọrọ Jehova nke si n'ọnụ mmụọ ozi ahụ gwa ya okwu.
Somefọdụ na -anwa ịrụ ụka na n'ihi na “aha m dị n'ime ya” na -ekwu maka mmụọ ozi nke Chineke na nke a pụtara na mmụọ ozi a nwere ọdịdị nke Chineke. Agbanyeghị, “aha” na -ezo aka n'ikike. Nke ahụ bụ, mmụọ ozi ahụ nwere ikike nke Chineke ma nwee ike igosipụta ike ya na Chineke ebe ọ na -adịghị mkpa inwe onlogy, isi ma ọ bụ ọdịdị nke Chineke. Mana onye nnọchi anya Chineke na -ebu ikike nke Chineke ma nwee ike ime ihe, ikwu okwu na ime ihe n'aha Chineke. Ya mere, Ọpụpụ 23: 20-23 amaokwu enweghị ihe na-adabaghị n'echiche nke inye onyinye. Ọtụtụ ntụnyere aka na-ekwu maka ndị nnọchite anya na-eme ihe n'aha Jehova gụnyere ndị nchụàjà Livaị (Deut 18: 5-8, Deut 22: 5), ndị amụma (Deut 18:22) yana David (1 Sam 17: 44-45, (2 Sam 6:18; Ọma 118: 10-13). Onye mere ebe mgbaba na ụwa, na enyemaka anyị dị n'aha JEHOVA (Ọma 124: 8) Mgbe a na -asị, 'Onye a gọziri agọzi ka onye ahụ na -abịa n'aha JEHOVA!' (Abụ Ọma 118: 26-27), onye nnọchi anya dị otú ahụ, n'agbanyeghị na ya onwe ya abụghị Jehova Chineke, ejiri ikike na ihu ọma Chineke gọzie ya. Nke a bụ eziokwu gbasara ndị ohu Chineke na ọkachasị Kraịst.
Ọpụpụ 23: 20-23 (ESV), aha m dị n'ime ya
20 “Lee, M na -eziga otu mmụọ ozi n'ihu gị ka ọ chebe gị n'ụzọ ma kpọbata gị ebe m kwadebere. 21 Lezienụ ya anya nke ọma ma rube isi n'ihe o kwuru; enupukwala isi megide ya, n'ihi na ọ gaghị agbaghara mmebi iwu gị, n'ihi na aha m dị n'ime ya. 22 “Ma ọ bụrụ na i gee ntị nke ọma n'olu ya wee mee ihe niile m kwuru, mgbe ahụ a ga m abụ onye iro ndị iro gị na onye na -emegide ndị na -emegide gị. 23 “Mgbe mmụọ ozi m ga -ebutere gị ụzọ kpọbata gị na ndị Amọraịt na ndị Het na ndị Perizaịt na ndị Kenean, ndị Haịvaịt na ndị Jebus, m wee kpochapụ ha.
Deuterọnọmi 18: 5-8 (ESV), ndị ozi n'aha Jehova (YHWH)
5 N'ihi na Jehova, bú Chineke -unu, rọputaworo ya n'ebo -unu nile iguzo ije ozi n'aha Jehova, ya na ụmụ ya ruo mgbe niile. 6 “Ọ bụrụkwa na a Onye Livaị ọ na -esi n'obodo ọ bụla nke si n'Izrel dum, ebe o bi - ọ ga -abịakwa mgbe ọ chọrọ - n'ebe Jehova ga -ahọrọ, 7 na -ejekwa ozi n'aha Jehova bụ Chineke ya, dị ka ụmụnne ya niile ndị Livaị ndị guzoro ije ozi n'ebe ahụ n'ihu Jehova, 8 mgbe ahụ ọ ga -enwe oke nha ka ọ ga -eri, ewezuga ihe ọ ga -enweta site na ire nna ya.
Deuterọnọmi 18:22 (ESV), Onye amụma na -ekwu okwu n'aha Jehova (YHWH)
22 mgbe ole onye amụma na -ekwu okwu n'aha Jehova, ma ọ bụrụ na okwu ahụ emeghị ma ọ bụ mezuo, nke ahụ bụ okwu nke Jehova na -ekwughị; onye -amuma ekwuwo ya npako. I kwesịghị ịtụ ya egwu.
(Deuterọnọmi 21: 5) Chineke gị ahọrọla ha ije ozi na ịgọzi n'aha Jehova (YHWH)
5 Mbe ahu ndi -nchu -àjà, bú umu Livai, gābiaru nso, n'ihi na Jehova, bú Chineke -unu, rọputara ha ijere Ya ozi na igọzi n'aha Jehova, na site n'okwu ha a ga -edozi esemokwu na mwakpo ọbụla.
1 Samuel 17: 44-45, a na m abịakwute gị n'aha Jehova (YHWH) nke ụsụụ ndị agha
44 Onye Filistia ahụ wee sị Devid: “Bịakwutenụ m, ka m nye anụ ufe nke eluigwe na anụ ọhịa.” 45 Devid wee sị onye Filistia ahụ, “Were mma agha na ube na ube bịakwute m. ma abiaram n'aha Jehova nke usu nile nke ndi -agha, bú Chineke nke usu nile nke ndi -agha nke Israel, onye I taworo uta.
2 Samuel 6:18, Ọ gọziri ndị mmadụ n'aha Jehova (YHWH)
18 Devid we surebìe àjà -nsure -ọku nile na àjà -udo nile. ọ gọziri ndị mmadụ n'aha Jehova nke ụsụụ ndị agha
Abụ Ọma 118: 10-13 (ESV), n'aha Jehova (YHWH) ka m bipụrụ ha
10 Mba niile gbara m gburugburu; n'aha Jehova ka m bipuru ha! 11 Ha gbara m gburugburu, gbaa m gburugburu n'akụkụ niile; n'aha Jehova ka m bipuru ha! 12 Ha gbara m gburugburu dị ka aesụ; ha puru dika ọku n'etiti ogwu; n'aha Jehova ka m bipuru ha! 13 A kwagidere m nke ukwuu, nke mere na m na -ada,
ma Jehova nyerem aka.
Abù Ọma 124: 8 (ESV), enyemaka anyị dị n'aha JEHOVA
8 Enyemaka anyị dị n'aha Jehova, onye kere eluigwe na ụwa.
Abụ Ọma 118: 26-27 (NIV), Ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-abịa n'aha Jehova (YHWH)!
26 Ngọzi na -adịrị onye na -abịa n'aha Jehova! Anyị na -agọzi gị n'ụlọ Jehova. 27 Jehova bụ Chineke, o mewokwa ka ìhè ya nwukwasị anyị.
Luk 19:38 (NIV), Ngọzi na -adịrị Eze ahụ nke na -abịa n'aha Onyenwe anyị
38 si, “Ngọzi na -adịrị Eze ahụ nke na -abịa n'aha Onyenwe anyị! Udo dịrị n'eluigwe, otuto dịkwa n'ebe kachasị elu! "
Jọn 12: 12-15 (NIV), Ngọzi na-adịrị onye na-abịa n'aha Onyenwe anyị, ọbụna Eze nke Israel
12 N'echi ya, oké ìgwè mmadụ ndị bịara oriri ahụ nụrụ na Jizọs na -abịa Jeruselem. 13 Ya mere, ha were igu nkwụ wee gaa izute ya, na -eti mkpu,Hosanna! Ngọzi na -adịrị onye na -abịa n'aha Onyenwe anyị, ọbụna Eze Izrel! " 14 Jisus we hu nwa -inyinya -ibu, we nọkwasi ya, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, si, 15 “Atụla egwu, ada Zaịọn; le, eze -gi nābia, nānọkwasi n'oke nwa -inyinya -ibu.
Zekaraya 3: 1-4, bụ okwu ọzọ nke mmụọ ozi Jehova ka a na-ewere dị ka onye na-ekwuchitere Jehova. E gosipụtara nke a n'amaokwu nke abụọ, "Jehova wee sị Setan," ka Jehova baara gị mba. Rịba ama na ọ sịrị "JEHOVA baara gị mba" kama "Abara m gị mba" (na -ekwu okwu na mmadụ mbụ).
Agbanyeghị, ụfọdụ na -ekwu na nke a metụtara ihe dị n'eluigwe, yabụ okwu a bụ mmụọ ozi nke Jehova ga -abụ nke Jehova n'onwe ya. Nke a bụ naanị arụmụka ụgha. Ọhụụ nke ihe nkiri nwere ike bụrụ ihe atụ na ọ dịghị mkpa ka ịgba akaebe na ihe mere eme dị adị. Ọ bụrụgodi na nke a bụ ihe mere eme n'eluigwe, ọ nweghị ihe mere a ga -eji chee na Chineke agaghị enyefe ikike na ndị nnọchi anya ikwu okwu na imere ya ihe. Enwere ọtụtụ ihe atụ nke ịnọrọ onwe ha n'ihu Jehova (YHWH).
Na 1 Ndị Eze 22: 19-23 mmụọ na-abịa n'ihu Jehova wee wepụta onwe ya ịrafu Ehab ka ọ daa site na ịbụ mmụọ ụgha n'ọnụ ndị amụma ya. Ma ọ na -ekwu n'amaokwu 23, "Jehova etinyela mmụọ ụgha n'ọnụ ndị amụma gị niile." A na -ekwu na ọ bụ Jehova (YHWH) mere ihe a n'agbanyeghị na ọ bụ onye nnọchi anya Chineke mere ya. E dekọrọ otu akụkọ ahụ na 2 Ihe E Mere 18: 18-21.
Abụ Ọma 103: 21, nọ na nkọwa dị mkpa nke na -asị "Gọzie Jehova, ụnụ ụsụụ ndị agha ya niile, unu ndị na -ejere ya ozi, ndị na -eme uche ya." Chineke nwere ndị ohu nọ ya nso.
Ndị Hibru 12: 22-24, na-akọwa ọnọdụ dị n'obodo nke Chineke dị ndụ, Jerusalem nke dị n'eluigwe ebe edepụtara Chineke na Jizọs iche iche ebe akpọrọ Jizọs dịka "onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ." N’ezie, Kraịst abanyela n’eluigwe, ka ọ pụta ugbu a n’ihu Chineke n’aha anyị (Ndị Hibru 9:24). Enwere otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile (1 Tim 2: 5-6).
Isi ihe dị na 1 Ndị Kọrịnt 15: 27-28 na-akwado nghọta a nke echiche nke inye onyinye site n'aka Kraịst:
N'ikpeazụ ọ ga -enyefe alaeze ahụ n'aka Chineke Nna.
Chineke edowo ihe nile n'okpuru ukwu Ya.
Chineke, onye doro ihe niile n'okpuru Kraịst, bụ naanị otu onye edobere n'okpuru Jizọs.
Mgbe edobere ihe niile n'okpuru Jizọs, a ga -edokwa Ọkpara ahụ n'onwe ya n'okpuru onye ahụ nke doro ihe niile n'okpuru ya.
(Zekaraia 3: 1-4) Onye isi nchụàjà na-eguzo n'ihu mmụọ ozi Jehova
Na1 Ekem enye ama owụt mi Joshua akwa oku guzo n'ihu mmụọ ozi Jehova, na Setan guzo n'aka nri ya iji bo ya ebubo. 2 Jehova we si Setan, "Jehova baara gị mba, Setan! Jehova nke rọpụtara Jerusalem baara gị mba! Nke a ọ́ bụghị ọkụ e wepụrụ n'ọkụ? ” 3 Joshua we guzo n'iru mọ -ozi ahu, yiri uwe ruru unyi. 4 Mọ -ozi ahu we si ndi guzoro n'iru ya, Wepunu ya uwe ruru unyi. Ọ si ya, Le, Ewepụwo m ajọ omume gị, m ga -eyiwe gị uwe mwụda dị ọcha. "
1 Ndị Eze 22: 19-23 (Mkpu), Jehova etinyela mmụọ ụgha n'ọnụ ndị amụma gị niile
19 Maikaia we si, N'ihi nka nuru okwu Jehova: Ahụrụ m Jehova ka ọ nọ ọdụ n'ocheeze ya, na ụsụụ ndị agha niile nke eluigwe ka ha na -eguzo n'akụkụ ya n'aka nri ya na n'aka ekpe ya; 20 Jehova we si, Whonye gārafu Ehab, ka o we rigo, da na Remot-gilead? Otù onye we kwue okwu, ibe -ya ekwu kwa ihe ọzọ. 21 Mmụọ wee bịa guzo n'ihu Jehova, sị, 'M ga -arafu ya. ' 22 Jehova we si ya, Gini bu gini? Ọ si, M'gāpu, buru mọ okwu -ugha n'ọnu ndi -amuma -ya nile. Ọ si, I gārafu ya, i g succeednwe kwa uche; pụọ mee otú ahụ. ' 23 Ma ub beholdu a, le, Jehova etiyewo mọ okwu -ugha n'ọnu ndi -amuma -gi ndia nile; Jehova ekwupụtawo ọdachi nye unu. "
(Abụ Ọma 103: 20-21) Gọzie Jehova, ụsụụ ndị agha ya niile, ndị na-ejere ya ozi, ndị na-eme uche ya
20 Gọzie Jehova, unu ndị mmụọ ozi ya, unu ndị dike na -eme okwu ya, na -erube isi n'okwu ya! 21 Gọzie Jehova, ụsụụ ndị agha ya niile, ndị na -ejere ya ozi, ndị na -eme uche ya!
Ndị Hibru 12: 22-24 (ESV), na Chineke… na Jizọs, onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ
22 Mana ị bịarutela ugwu Zaịọn na obodo nke Chineke dị ndụ, Jerusalem nke eluigwe, na ọtụtụ ndị mmụọ ozi na nnọkọ oriri, 23 nye kwa nzukọ nke ọkpara e debara aha ha n'eluigwe, nye Chineke, Onyeikpe nke mmadụ niile, e nyekwara mmụọ nke ndị ezi omume izu okè, 24 nyekwa Jizọs, onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, na ọbara a fesara efesa nke na -ekwu okwu ka mma karịa ọbara Ebel.
Ndị Hibru 9:24 (Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ), Kraịst abanyela n'ihu Chineke n'aha anyị
24 N'ihi na Kraist abatawo, ọ bụghị n'ebe nsọ e ji aka mee, bụ́ ihe atụ nke ihe bụ eziokwu, kama ọ bụ n'ime eluigwe n'onwe ya, ugbu a ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị.
(1 Timoti 2: 5-6) Otu Chineke dị, yana otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs
1 Ndị Kọrịnt 15: 24-28 (ESV), ewezuga onye debere ihe niile n'okpuru ya
24 Mgbe ahụ ka njedebe ga -abịa, mgbe ọ ga -enyefe alaeze ahụ n'aka Chineke Nna mgbe ọ mebisịrị iwu ọ bụla na ikike na ike niile. 25 N'ihi na ọ ga -abụrịrị eze ruo mgbe o debere ndị iro ya niile n'okpuru ụkwụ ya. 26 Onye iro ikpeazụ a ga -ebibi bụ ọnwụ. 27 n'ihi na "Chineke edowo ihe nile n'okpuru ukwu Ya. ” Ma mgbe ọ na -ekwu, "edobere ihe niile n'okpuru," ọ pụtara ìhè na onye ewepụrụ ihe niile n'okpuru ya. 28 Mgbe edobere ihe niile n'okpuru ya, mgbe ahụ Ọkpara ahụ n'onwe ya ga -edokwa onwe ya n'okpuru onye ahụ nke doro ihe niile n'okpuru ya, ka Chineke buru ihe nile.
Somefọdụ na -ekwu na n'ihi na mmụọ ozi Jehova na -asị "ewepụwo m ajọ omume gị" na mmụọ ozi ahụ bụ JEHOVA n'ihi na ọ bụ naanị Jehova Chineke nwere ike ịgbaghara mmehie. Agbanyeghị, mmụọ ozi Jehova na-ekwuchitere Jehova dịka nke pụtara na Zec 3: 6-9, nke na-asị, “Mmụọ ozi nke Jehova wee gwa Jọshụa nke ọma, sị,“ Nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru: Ọ bụrụ na ị banye n'ime ụzọ m ma debe iwu m, mgbe ahụ ị ga -achị ụlọ m, lekọtakwa ogige m… O doro anya na mmụọ ozi Jehova dị iche n'ebe a na Jehova mana ọ na -ekwuchitere Jehova.
Echiche nke na ọ bụ naanị Chineke nwere ike ịgbaghara mmehie bụ ụgha. Dịka ọmụmaatụ na Aịsaịa 6: 5-7, a na-ekpuchi mmehie na iwepụ amamikpe bụ ihe serafim mere.
Ọ bụ ezie na ikike ịgbaghara mmehie nwere ike isi n'aka Chineke, ndị enyere ikike ma ọ bụ ikike nwere ike ime ya. Ntụle nke ndị odeakwụkwọ na Mak 2: 7 na -asị "onye nwere ike ịgbaghara ọbụ abụ ma ọbụghị naanị Chukwu." adabaghị. Jizọs gbaziri ha na -asị, "Nwa nke mmadụ nwere ikike n'ụwa ịgbaghara mmehie." N'ime ime nke a, ọ kọwara onwe ya abụghị Chineke kama Nwa nke mmadụ. Ma anyị maara na Chineke enyela ya ikike niile. (Matiu 11:27, Luk 10:22, Jọn 3:35, Jọn 13: 3). Jizọs kwukwara na ọ bụ ihe dị nfe ikwu 'agbaghara mmehie gị' karịa ịsị, 'Bilie, buru ihe ndina gị gawa'. Ikike inye ndụ ebighi ebi bụ ike kasịnụ enyerela Jizọs ma anyị maara na Jọn 5: 25-26 na Chineke nyere ya ikike a n'ihi na Jizọs bụ Nwa nke mmadụ (Mezaịa ahụ). Site na nrube isi nke otu mmadụ a ga -eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume (Ndị Rom 5:19).
Jọn 20:21 bụ isi ihe na -egosi na inwe ike ịgbaghara mmehie bụ ikike ewepụtara. E nyekwara ndị na -eso ụzọ Jizọs ike ịgbaghara mmehie mgbe Jizọs kwuru, "Dịka Nna m zitere m, otu a ka m si eziga gị" yana "ọ bụrụ na ị gbaghara mmehie nke onye ọ bụla, a gbagharala ha."
Zekaraya 3: 1-9 Ewepụwo m ajọ omume gị
Na1 Ekem enye ama owụt mi Joshua akwa oku guzo n'ihu mmụọ ozi Jehova, na Setan guzo n'aka nri ya iji bo ya ebubo. 2 Jehova we si Setan, "Jehova baara gị mba, Setan! Jehova nke rọpụtara Jerusalem baara gị mba! Nke a ọ́ bụghị ọkụ e wepụrụ n'ọkụ? ” 3 Joshua we guzo n'iru mọ -ozi ahu, yiri uwe ruru unyi. 4 Mọ -ozi ahu we si ndi guzoro n'iru ya, Wepunu ya uwe ruru unyi. Ọ si ya, Le, Ewepụwo m ajọ omume gị, m ga -eyiri gị uwe mwụda dị ọcha. ” 5 M wee sị, “Ka ha tinye ya ákwà nhicha dị ọcha n'isi ya.” Ntre mmọ ẹsịri ọfọn̄ibuot emi asanade enye ke ibuot ẹnyụn̄ ẹsịne enye ọfọn̄. Mọ -ozi nke Jehova n byguzo kwa n'akuku ya.
6 Mọ -ozi nke Jehova we me ka obi sie Joshua ike, 7 "Otú a ka Jehova nke usu nile nke ndi -agha siri: Ọ buru na unu eje ije n'uzọm nile, debe ihe -ndebem, unu g rulebu -kwa -ram ulom, buru kwa ihe -ndebe nke ogigem nile., m ga -enye gị ikike ịbanye n'etiti ndị guzo ebe a. 8 Nụrụ ugbu a, Jọshụa nnukwu onye nchụàjà, gị na ndị enyi gị ndị na -anọdụ n'ihu gị, n'ihi na ha bụ mmadụ bụ ihe ịrịba ama: lee, aga m ewetara ohu m Alaka. 9 N'ihi na, le, n'elu nkume ahu nke m dobere n'iru Joshua, n'elu otù nkume nke nwere anya asa, ka M'g willdekwasi ihe -ndebe -ya, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova nke usu nile nke ndi -agha puta, M'g willwezuga kwa ajọ omume ala nka n'otù ubọchi.
Aisaia 6: 5-7 (ESV), Lee, nke a metụrụ egbugbere ọnụ gị aka; ewepuwo ikpe ọmụma gị, kpuchiekwa mmehie gị
M wee sị: “Ahụhụ na -adịrị m! N'ihi na efuwom; n'ihi na abụ m onye egbugbere ọnụ ya na -adịghị ọcha, m na -ebikwa n'etiti ndị egbugbere ọnụ na -adịghị ọcha; n'ihi na anya m ahụwo Eze, Jehova nke ụsụụ ndị agha. ” 6 Otu n'ime ndị seraf wee fekuo m, na -eji ọkụ na -ere ọkụ nke o ji nkò were ebe ịchụàjà were.. 7 O wee metụ m ọnụ wee sị: “Lee, nke a metụrụ egbugbere ọnụ gị aka; ewepuwo ikpe ọmụma gị, kpuchiekwa mmehie gị. "
Mak 2: 5-11 (NIV), Nwa nke mmadụ nwere ikike ịgbaghara mmehie n'ụwa
5 Ma mgbe Jizọs hụrụ okwukwe ha, ọ sịrị onye ahụ akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, “Nwa m, a gbagharawo gị mmehie gị.” 6 Ugbu a ụfọdụ n'ime ndị odeakwụkwọ nọ ọdụ n'ebe ahụ, na -ajụ n'ime obi ha, 7 “Gịnị mere nwoke a ji na -ekwu otu a? Ọ na -ekwulu Chineke! Onye nwere ike ịgbaghara mmehie ma ọbụghị naanị Chukwu? " 8 Ngwa ngwa ebe Jisus huru na mọ -Ya na ha nāju ajuju n'etiti onwe -ha, Ọ siri ha, Gini mere unu nāju ihe ndia n'obi -unu? 9 Kedu nke ka nfe, ịsị onye ahụ akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, 'A gbagharawo gị mmehie gị,' ma ọ bụ ịsị, 'Bilie, buru ihe ndina gị jee ije'? 10 Ma ka unu wee mara na Nwa nke mmadụ nwere ikike n'ụwa ịgbaghara nmehie” - ọ sịrị onye ahụ akụkụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ- 11 “Asị m gị, bilie, buru ihe ndina gị laa.”
Jọn 5: 25-27 (NIV), Nna ahụ enyela Ọkpara ahụ inwe ndụ n'ime onwe ya
25 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ. 26 N'ihi na dika Nnam nwere ndu nime onwe -ya, otú a ka O nye -kwa -ra Ọkpara -Ya inwe ndu nime Onwe -ya. 27 O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ.
(Ndị Rom 5:19) Site na nrube isi nke otu onye a ga -eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume
19 N'ihi na dị ka site na nnupụisi nke otu onye ahụ ọtụtụ mmadụ mere mmehie. ya mere site na nrube isi nke otu onye a ga -eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume.
(Jọn 20: 21-23) Ọ bụrụ na ị gbaghara onye ọ bụla mmehie ya, a gbagharala ya
21 Jizọs sịrị ha ọzọ, “Udo dịrị unu. Dị ka Nna m zitere m, otu a ka m si eziga gị. " 22 Mb whene O kwusiri nka, O we kuda ume, si ha, Nata Mọ Nsọ; 23 Ọ bụrụ na ị gbaghara nmehie nke onye ọ bụla, a ga -agbaghara ha; ọ bụrụ na ịghara ịgbaghara onye ọ bụla, a na -egbochi ya. ”
Ndị Ikpe 13: 21-23 na-egosi na mmụọ ozi Jehova abụghị Jehova Chineke. Nke a bụ n'ihi na Manona na nwunye ya anwụghị. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ụzọ nkịtị JEHOVA (YHWH) ka ha hụrụ mgbe ahụ ha gaara anwụrịrị (Ọpụ 33:20), Ọ bụ naanị Ọkaaka, onye ọ bụla hụtụbeghị ma ọ bụ hụ ya (1 Tim 6:16). Okwu maka Chineke na Ndị Ikpe 13: 21-23 sitere na Hibru chihim nke pụtara onye dị ike ma nwekwara ike tinye ya n'ọrụ ndị mmụọ ozi. Agbanyeghị na ha hụrụ dike (mmụọ ozi nke Jehova) ha anwụghị n'ihi na ha ahụghị Jehova n'onwe ya.
Ndị ikpe 13: 21-23 (ESV), Anyị ga-anwụrịrị n'ihi na anyị ahụla Chineke
21 Mmụọ ozi Jehova apụtaghị ìhè ọzọ nye Manoa na nwunye ya. Manoa wee mara nke ahụ ọ bu mọ -ozi nke Jehova. 22 Manoa wee sị nwunye ya:Anyị ga -anwụrịrị, n'ihi na anyị ahụla Chineke. " 23 Ma nwunye ya sịrị ya, "A sị na Jehova bu n'obi igbu anyị, ọ garaghị anara àjà nsure ọkụ na àjà ọka n'aka anyị, ma ọ bụ gosi anyị ihe ndị a niile, ma ọ bụ ugbu a gwa anyị ụdị ihe ndị a.. "
Ọpụpụ 33: 17-20 (ESV), I nweghị ike ịhụ ihu m, n'ihi na mmadụ agaghị ahụ m wee dị ndụ
17 Jehova we gwa Moses okwu, "Nke a bụ ihe ị kwuru, m ga -eme ya, n'ihi na ị hụla amara n'ihu m, amakwaara m gị n'aha." 18 Mozis wee sị, “Biko, gosi m ebube gị.” 19 Ọ si, Mu onwem g makeme ka idi -nmam nile gabiga n'iru gi, ọ bu kwa aham ka m'gimkwusa n'iru gi n'aham, Jehova. M'g beme -kwa -ra amara onye m'g bemere amara, M'g willnwe kwa obi -ebere n'aru onye ahu nke M'g showmere ebere. 20 Mana ọ sịrị, "ị nweghị ike ịhụ ihu m, n'ihi na mmadụ agaghị ahụ m wee dị ndụ."
1 Timoti 6:16, onye ọ dịbeghị onye hụtụrụla ma ọ bụ hụ ya anya
16 onye nanị ya nwere anwụghị anwụ, onye bi n'ìhè a na -apụghị ịbịaru nso, onye ọ na -ahụtụbeghị ma ọ bụ hụ ya. Ọ bụ ya nwe nsọpụrụ na ịchịisi ebighi ebi. Amen.